Ramatoa Mialy RAJOELINA sy ireo Ministra vehivavy : Nitsidika sy nitondra fanampiana ho an’ireo tra-boina – METFP
Ramatoa Mialy RAJOELINA sy ireo Ministra vehivavy : Nitsidika sy nitondra fanampiana ho an’ireo tra-boina
🙏🏼Mitohy ary tsy mitsahatra manolo-tanana ireo tra-boina Ramatoa RAJOELINA Mialy, ka tonga nitsidika sy nanome fanampiana ireo tra-boina avy amin’ny distrikan’Ambohidratrimo sy Antananarivo VI.
▶️Miisa hatrany amin’ny fianakaviana 257 no mitoby eto Ambohitrimanjaka ary saika fianakaviana mpamboly ny ankamaroan’izy ireo.
⭐Tsy namela azy ireo ho irery Ramatoa vadin’ny Filoham-pirenena sy ireo Ministra vehivavy, mpikambana ao amin’ny Governemanta fa tonga nitsidika azy ireo ny Alatsinainy 31 janoary 2022. Isan’izany Ramatoa VAVITSARA Gabriella Rahantanirina, Ministry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa.
✅Fiaraha-mientan’ny Association Fitia sy ny BNGRC ary ny Ministeran’ny mponina izao hetsika famonjena ny mpiray tanindrazana izao, ka notolorana sakafo tosika « Koba Aina » ireo ankizy miisa 244 tao an-toerana. Teo koa ny fanomezana azy ireo ny Ferozinc izay manampy azy amin’ny fitomboana sy hampiakatra ny hery fiarovana.
➡️Ahitana « Clinique mobile » miisa efatra (04) ao an-toerana, ka afaka manao ireo karazana fizaham-pahasalamana sy manara-maso ny fitondrana vohok’ireo tra-boina. Eo koa ny fandraisana an-tanana ireo vehivavy hiaran’ny herisetra izay tsinjovin’ny Association Fitia manokana.
➡️Ankilan’izay, misy koa ny fizarana kidoro, bodofotsy, vary, menaka, sira, jiro sns isan-tokantrano avy amin-dRamatoa RAJOELINA Mialy.
©️ SCOM METFP/ janvier 2022